Izibonelelo zaseItaly - Preposizioni e-Italiano
Preposizioni e Italiano
Amalungiselelo angamazwi angahlawulelwayo anceda ukudibanisa nokudibanisa ezinye izivakalisi okanye igatya: vado a casa di Maria ; okanye ukudibanisa amabini amabini okanye ngaphezulu: vado a casa di Maria per studiare .
Umzekelo ubonisa i- funzione subordinante (umsebenzi ophantsi) wezithuba zokuqala eziza "ukuzaliswa" kwesenzi, nokuba sisibizo okanye isivakalisi sonke. Ngokukodwa: iqela eliphambili le -casa lixhomekeke kwisenzi isenzi, esilungisayo; Iqela eliphambili le- di di Maria lixhomekeke kwisibizo-magama, esilungisayo; Iqela elidlulileyo kwi-studiare liyigatya eligqityiweyo (elihambelana nesigatshana sokuphela: 'nganye kwi-studiare'), exhomekeke kwisigatshana esiyinhloko vado a casa di Maria .
Xa utshintsho oluvela kwelinye igatya eliyi-vado le-casa di Maria ukuya kwisigwebo sesibini somgaqo-mvume , u-analogy osebenzayo unokuchazwa phakathi kwe- preposizioni kunye ne- congiunzioni . Ookuqala uzisa isifundo esipheleleyo (oko kukuthi, ngesenzi kwisimo esingapheliyo): digli di tornare ; Oku kulandelayo kufaka isifundo esicacileyo (oko kukuthi, ngesenzi ngesimo esicacileyo): digli che torni .
Izibalo eziqhelekileyo eziqhelekileyo zilandelayo:
di (ingaba iphakamileyo phambi kwesinye isibonakaliso, ngakumbi ngaphambi kokuba: i- impeto , i- Italia , d'Oriente , ye-estate )
(i- ad ad term usetyenziso, kunye ne- d eufonica , phambi kwesinye isibonakaliso, ngakumbi phambi kokuba: u- Andrea , i- ad aspettare , i-adpipio )
Ezi zilandelayo zilandelayo zidweliswe ngamaxesha okusetyenziswa: da ,, con , su , nganye , tra (fra) .
Di , a , da , in , con , su , nganye , tra (fra) zibizwa ngokuba yizinto ezilula ( preposizioni semplici ); ezi zikhundla (ngaphandle kweendlela kunye neengqungquthela ), xa zidibaniswe nenqaku elichanekileyo , zivelisa kwizinto ezibizwa ngokuba ngamaqendu okuqala ( preposizioni articolate ).
Iimvama eziphezulu zezi zihlandlo zihambelana neentlobo zeentsingiselo ezivakalisayo, kwakunye nolunye udidi olunxibelelwano olunokwenziwa phakathi kwamalungu ebinzana. Ixabiso elithile ukuba i-preposition efana ne- di okanye ibambe kwiimeko ezahlukeneyo iqondwa kuphela ngokumalunga namazwi apho i-preposition iqela, kwaye iguquka ngokohlobo lwayo.
Ngamanye amazwi, indlela yodwa yesiNtaliyane engesiyo isizwe ukuqonda indlela ezisetyenziselwa ngayo izibhengezo zaseItali ukuziqhelanisa nokuziqhelanisa neepateni ezininzi.
Ukuphindaphinda kwemisebenzi kwinqanaba le-semantic neli-syntactic libonakaliswe, eqinisweni, ngokugxininiswa ngakumbi kwiimeko ezingabonakaliyo. Cinga, umzekelo, i-preposition di . Ibinzana eliphambili le-amore del padre , ngokuxhomekeke kumongo, linokubhaliweyo okanye i- complemento di specificazione soggettiva okanye icomplemento di specificazione oggettiva . Eli gama lilingana nokuba il padre ama qualcuno (ubaba uthanda umntu) okanye qualcuno ama il padre (umntu uthanda uyise).
Ukushiya Zonke Ithemba, Nina Abafundayo
Umzekelo wembali wokungabonakali uvela kwigama elidumileyo likaDante erdere il ben dell'intelletto (i- Inferno, III, 18 ), eliye laba ngumzekeliso ngqondweni "wokulahlekelwa okulungileyo, ukulahlekelwa ingqiqo." U-Dante wayebhekisela endaweni yemiphefumlo yeHerhena, kwaye iinjongo ze- dell'intelletto zenzelwe ingqiqo "ngengqiqo yeengqondo zabo, oko kulungile ukuqonda," oko kukuthi, ukucamngca kukaThixo, ngaphandle kokulahlwa. Ukuchazwa ngokuthe ngqo kwinqaku le-prepositional dell ' litshintsha kakhulu intsingiselo ebanzi yeli binzana.
Ukugqitywa kweVerb verb
Iimpawu zokuQulunqwa kweeNkqubo eziPhambili - # 2 - 'ye / / / / /'
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Stare" ngesiTaliyane
Funda ii-4 ze-German Noun Cases
Yintoni efunekayo yokwakha i-RC Submarine?
Indlela yokubiza ngokuba yi-Tsai Ing-wen (Cai Ying-wen)
Umsebenzi Omkhulu Wabafundi Ngaba Abafundi Bamele Baphumelele?
Iingoma eziphezulu ze-Jay Z eziphezulu
Uluphi uhlobo oluhle kakhulu lwe-Art Martial kuwe?
'Indlu yeDololi' Imibuzo YokuFundisisa neNgxoxo
I-Eye - Idioms kunye neMifanekiso
I-Sivapithecus, i-Primate eyaziwayo njengeRamapithecus
Iimpawu zeCitric Acid Cycle Steps
Intshayelelo eNkosini Shiva